7 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Destinations များကိုချစ်ပါ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထား Travel အီတလီ >7ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Destinations များကိုချစ်ပါ
ဥရောပရဲတိုက်များနှင့်ရှေးဟောင်းမြို့ကြီးများမှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဟောင်ကောင်အထိ, ဤ7ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာနေရာများသည်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတိုးပွားစေပါလိမ့်မည်. ဤ7အချစ် ဦး တည်ရာများသည်သင်၏အချစ်ဇာတ်လမ်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအခန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, နှင့်မှော်ပြန်လည်စတင်ရန်.
1. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအချစ်ဆုံးသောအချစ်ဆုံးနေရာ: ပဲရစ်
“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ” အတွက်အဘိဓါန်တွင်အဘိဓာန်တွင်ထပ်တူသင်္ကေတများကိုသင်ရှာမည်ဆိုလျှင်, သငျသညျပဲရစ်ကြီးတွေအက္ခရာများအတွက်စာလုံးပေါင်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ၎င်း၏နားမလည်နိုင်လောက်အောင်ကျက်သရေ, ညဘက်အလှတရား, အချစ်, နှင့်ရင်ခုန်စရာ pics များအတွက်အစက်အပြောက်အများကြီး, ပဲရစ်ကိုတစ် ဦး ပါစေ7ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနေရာများ.
လှပသော La Marais ရပ်ကွက်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်, လမ်းပေါ်ကဂီတကိုနားထောင်ခြင်း, သို့မဟုတ်အလှဆုံးနေရာများအတွက်ပျော်ပွဲစားရှိခြင်း, ပဲရစ်ဟာအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဟုတ်ကဲ့, ပါရီသည်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ ပျားရည်ဆမ်းခရီး ဦး တည်ရာ ဥရောပမှာ, ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်ခုန်စရာအစက်အပြောက်တွေအားလုံးကိုကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်. သို့သျောလညျး, ဒီလှပတဲ့မြို့ဟာအစက်အပြောက်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်, ဘယ်မှာမင်းရဲ့အချစ်တွေကိုအော်ဟစ်နိုင်တယ်, သို့မဟုတ်ခရီးသွား-ည့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်. ပါရီသည်အချစ်ဆုံးမြို့ဖြစ်သည်, အားလုံးစုံတွဲများအဘို့, သက်တံအဆင်းအရောင်အားလုံးအတွက်.
ပဲရစ်မှာလုပ်ဖို့အများဆုံး Romantic အရာ
Musee Carnavalet န်းကျင်လှည့်လည်, တူးမြောင်းစိန့်မာတင်မှာနမ်း, အင်္ဂလန် Champs de Mars နေရာတွင်ပျော်ပွဲစားပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကိုပျော်မွေ့ပါ.
2. အီတလီနိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးအချစ် ဦး တည်ရာ: ဗင်းနစ်
ဗင်းနစ်သည်ဥရောပရှိခရီးသွား most ည့်သည်များအများဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်, သင်အများအပြားဝှက်ထားသောအစက်အပြောက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ဘယ်မှာ gelato သို့မဟုတ်ပီဇာမျှဝေပါ. မြို့၏တံတားများသည်သင်နှင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုလမ်းမထောင့်သို့ ဦး တည်သွားလိမ့်မည်, လမ်းဆုံ, နှင့်ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်များ, မင်းဘယ်မှာလောင်မလဲ အီတလီအစားအစာ, အီတလီဝိုင် (သို့) Aperol နှင့်ချစ်ရန် toast.
ဗင်းနစ်မြို့ရှိပြီးပြည့်စုံသောရင်ခုန်စရာနေ့သည်တံတားများစွာကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မည်. ထိုအခါ, မင်းအတွက်ပီဇာစားနိုင်တယ်2နှင့် gelato. ခရီးစဉ်ကိုထွက်ခွာရန်အကြံပြုပါသည်2ချစ်စရာကောင်းကျွန်းများ Burano နှင့် Murano, ထိုနေ့၏ဒုတိယတစ်ဝက်သည်, ပြီးနောက်ခရီးသွား of ည့်လူအစုအဝေးစွန့်ခွာ. ဒီလမ်း, ကျွန်းရှိသမျှတို့ကိုကိုယ်အဘို့သိမ်းယူရမည်, ရင်ခုန်စရာ pics သည်.
ဗင်းနစ်မှာလုပ်ဖို့အများဆုံး Romantic အရာ
Dorsoduro ပတ်ပတ်လည်လှည့်လည်, ဒေသခံရပ်ကွက်, သို့မဟုတ် Cantina Do Spade တွင်စားသောက်ပါ, Casanova ညစာစားလေ့ရှိရာ. ထိုအခါ, မင်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ Burano ကျွန်းပေါ်မှာနေ့လည်စာစားလို့ရပါတယ်, နှင့်နေဝင်ချိန်မှာ gondola စီးနင်းခံစားပါ. သင်သည်သင်၏ရင်ခုန်စရာအားလပ်ရက်ကိုမင်းနှင့်စတင်နိုင်သည် ရင်ခုန်စရာရထားခရီး လန်ဒန်သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်ကနေဗင်းနစ်အထိ.
3. ဥရောပမှာ Destinations ကိုချစ်: ရေကန် Como
နေကအဲလ်ပ်တောင်ပေါ်မှာနေတယ်, ကန်ထဲမှာထင်ဟပ်, နှင့်သင်ချစ်ရာသခင်နှင့်အတူလမ်းလျှောက်နေကြသည် ချစ်သူများ၏လမ်းလျှောက်, Varenna အတွက်ချစ်သူများ၏လမ်းကြောင်း. အကယ်စင်စစ်သင်သည်ဤစေသည်သဘောတူပါလိမ့်မယ် Como ရေကန်သည်မမေ့နိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာတည်နေရာ များအတွက်ရင်ခုန်စရာထွက်ပြေးဖို့သည် 2.
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Varenna မြို့အပြင်, Bellagio, Vezio သည် Como ရေကန်နှင့်အံ့မခန်းဖွယ်အစက်အပြောက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အံ့မခန်းဖွယ်မြင်ကွင်းများကိုပေးသည်.
Monte Crocione ရှိမှော်အပန်းဖြေဖို့အတွက် Lari တောင်များရှိစူပါရင်ခုန်စရာလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုခံစားပါ. သင် adrenaline ကိုချစ်သောစုံတွဲဖြစ်ပါက, ထို့နောက်အိုင်အထက်ရှိပင်လယ်ရေကြောင်းခရီးစဉ်သည်ထိုလိပ်ပြာများကိုနှိုးပါလိမ့်မည်!
4. တရုတ်နိုင်ငံတွင်တည်နေရာကိုချစ်: ဟောင်ကောင်
မော်ဒန်, စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ, နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်, ဟောင်ကောင်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအချစ်ဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. မြို့တော်ရဲ့မိုးမျှော်တိုက်, နှင့်ကျွန်းများ, သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖမ်းယူနိုင်မည့်ရုပ်ပုံများအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းများကိုကမ်းလှမ်းပါ. ဟောင်ကောင်သည်နေ့အလင်းရောင်နှင့်ညဘက်မီးများ၌အလွန်ကောင်းမွန်သည်, နေဝင်ချိန်နှင့်နေထွက်, အများအပြားရင်ခုန်စရာလှုပ်ရှားမှုများကမ်းလှမ်း, တစ်ဘို့ နှစ်ယောက်အတွက်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေ, ဒါမှမဟုတ်မော်ကွန်းစွန့်စားမှု, ထိပ်၌ထားခြင်း7ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနေရာများ.
ပြီးပြည့်စုံသောအချစ်ဇာတ်လမ်းသည်ဗစ်တိုးရီးယားဆိပ်ကမ်းကိုလှည့်ပတ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မည်, သို့မဟုတ် Repulse ဂလားပင်လယ်အော်သဲကမ်းခြေ၌ပျော်ပွဲစား. နေ့လည်ခင်းမှာ, သင်ကသီးသန့်ချက်ပြုတ်သင်တန်းကိုတက်နိုင်သည်, နှင့်နေဝင်ချိန်မှာချစ်ရန်သင့်မျက်မှန်မြှင့်နှင့်အတူပြီးအောင်.
5. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Destination ကိုချစ်: သြစတြီးယား
သြစတြီးယား, ရဲတိုက်တို့၏မြေကို၎င်း၊, အံ့ဖွယ်ဥယျာဉ်များ, နှင့်ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့်မြို့များ, ဥရောပတိုက်တွင်လူကြိုက်များသောအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်. သငျသညျလူအစုအဝေးမှလွတ်မြောက်ရန်လိုလျှင်, ထို့နောက် Halstatt ပြီးပြည့်စုံသော ဦး တည်ရာသည်, အခြားအအပြင် ဗီယင်နာမှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေ့ခရီးများ.
Innsbrucker ကဲ့သို့သောအံ့ဖွယ်သဘာ ၀ သယံဇာတများသည်သြစတြီးယားတောင်တန်းများနှင့်ချိုင့်ဝှမ်းအပေါ်အဆင်းလှသောရှုခင်းများကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်, ရင်ခုန်စရာတိုးမြှင့်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, ပျော်ရွှင်ဖွယ် - အစဉ်အလာ - ဒဏ္endာရီအချစ်ဇာတ်လမ်းများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်. သို့သျောလညျး, သင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောမြို့ပြထွက်ပြေးဖို့ပိုနှစ်သက်လျှင်, ထို့နောက်ဗီယင်နာသည်အချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်လုံးဝပြီးပြည့်စုံသည်. ထို့အပြင်, ဗီယင်နာတစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာတဝှမ်း LGBT နှင့်အဆင်ပြေဆုံးနေရာများ, ဒါကြောင့်အားလုံးစုံတွဲများကြိုဆိုသည်, မည်သည့်ကြားဆက်ဆံရေး status ကို၌တည်၏, ရုံသင်နှင့်သင့်သိသာသည်အခြားအဘို့အစောင့်ဆိုင်း.
ဒေသခံကဖေးတွင်မနက်စာစားရန်သြစတြီးယားနိုင်ငံ၏ရင်ခုန်စရာနေ့တစ်နေ့ကိုစတင်မည်. ထိုအခါ, သြစတြီးယားဥယျာဉ် (သို့) ရဲတိုက်သို့လမ်းလျှောက်ထွက်ပါ. ဖြည့်စွက်ကာ, ခင်ဗျားဟာအားကစားစုံတွဲတစ်ယောက်ဆိုရင်သြစတြီးယားတောင်တန်းတွေမှာခြေလျင်ခရီးတက်ပါ, စံပြဖြစ်လိမ့်မည်.
6. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Destinations များကိုချစ်ပါ: ပရာ့ဂ်
Petit နှင့်ချစ်စရာကောင်း, ပရာ့ဂ်ဟာအလွန်အမင်းရင်ခုန်စရာကောင်းပြီးကျွန်မတို့ရဲ့နေရာကိုမှန်ကန်စွာပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်7ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးအချစ်ဆုံးသောနေရာများ. ဟုတ်ကဲ့, ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်, ဒါပေမယ့်ရှုထောင့်များနှင့်အစိမ်းရောင်ပန်းခြံတွေရှိတယ်, ခရီးသွားများ၏လူအစုအဝေးကိုရှောင်ရှားရန်, နှင့်နေဆဲပျော်မွေ့ အဟောင်းပရာ့ဂ်၏အကောင်းဆုံး.
ချစ်စရာလေးဘား, ခမ်းနားတံတားများ, နှင့် Mala Strana ရပ်ကွက်သည်အချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောနေရာဖြစ်သည်. ပရာ့ဂ်သည်ဥရောပတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, ဝှက်ထားသောအစက်အပြောက်အတော်များများရှိပါတယ်; ချစ်စရာကောင်း Mala Strana ရပ်ကွက်အတွင်း, နှင့်မြို့အမြင်များနှင့်အတူပန်းခြံ, Palacky တံတား, တစ်ခုသာ ဝှက်ထားသောရင်ခုန်စရာအနည်းငယ်.
ပရာ့ဂ်မှာလုပ်ဖို့အများဆုံး Romantic အရာ
Mala Strana တွင်လမ်းလျှောက်, အဆိုပါ Vltava မြစ်နားမှာဘီယာ, မြို့တော်ရှုခင်းများနှင့်အတူညစာ, နှင့် Hemingway ဘားရှိကော့တေး.
7. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Destinations များကိုချစ်ပါ: အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ရေကန်ခရိုင်
နေရာတစ်ခုဝီလျံ Woodsworth ရဲ့ရင်ခုန်စရာကဗျာမှုတ်သွင်းတဲ့အခါ, ထို့နောက်၎င်းသည်ထိပ်ဆုံးအချစ် ဦး တည်ရာဖြစ်သည်. တကယ်ပါပဲ, အနောက်အင်္ဂလန်ရှိရေကန်သည်အလွန်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်6အင်္ဂလိပ်ကျေးလက်နှင့်ရှုခင်း၏သဘာဝသိုက်, နှင့် 16 ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းရေကန်များ.
Cumbria ဒေသတွင်တည်ရှိသည်, ရေကန်များသည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏အလှပဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, တောင်ကုန်းများသို့ဆင်းလာသည်, ရေကန်များနှင့် tarns ရန်, ကမ္ဘာပေါ်တွင်လုပ်ရမည့်အချစ်ဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. သငျသညျမှော် Jane Austen ဝတ္ထုသို့နင်းနေကြသည်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်, ဘယ်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အတားအဆီးအားလုံးကိုခုခံတွန်းလှန်.
Cumbria တွင်အများဆုံး Romantic နေရာများ
Keswick ရဲ့ရေကန်, အိုင်နားကပျော်ပွဲစားဆင်းအံ့သြဖွယ်တိုးမြှင့်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, Helvellyn အထွတ်အထိပ်, နှင့်ရေတံခွန်နှစ်ခုများအတွက်လုံးဝအိပ်မက်မက်သောနေရာများဖြစ်ကြသည်.
ဤ7ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်နေရာများသည်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာများဖြစ်သည်. ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုဤစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနေရာများသို့စီစဉ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ Love7Destinations Worldwide” ကိုမင်းရဲ့ site ထဲထည့်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Flove-destinations-worldwide%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ခရီးစဉ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ LoveDestinations အချစ်ဇာတ်လမ်း RomanticvacationEurope weddinginEurope